WestJet inodaidza Executive VP mutsva uye Chief Loyalty Officer
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » WestJet inodaidza Executive VP mutsva uye Chief Loyalty Officer
WestJet nhasi yazivisa kugadzwa kwaKarl Schuster, seMutevedzeri weMutungamiriri wendege uye Chief Loyalty Officer (CLO). Schuster achabatana nechikwata chekutungamira cheWestJet kutanga kwa2022, zvichitevera kupedzwa kwemaitiro ekubvakacha.
Schuster ane makore anopfuura gumi nemapfumbamwe echiitiko chekuvimbika, kusanganisira makore matanhatu seChief Executive Officer (CEO) weVelocity Frequent Flyer, chirongwa cheVirgin Australia chekuvimbika. Munguva yake paMhandara yeAustralia, Schuster akakura Velocity kuva imwe yepurogiramu huru yekuvimbika muAustralia, ichiwedzera zvakanyanya mari yavo yegore negore; kuwedzera vanyori venhengo kusvika kumamiriyoni gumi, kubva kune avo vaimbova 19 miriyoni nhengo; uye kukura kudyidzana nema brand akakosha munyika yose. Asati asvika kuVelocity, Schuster anotungamira zvirongwa zvemakore mazhinji ekuvimbika kweQantas, British Airways and Malaysia Airlines uye akapa zano rekubvunza kune dzakasiyana siyana dzendege mumakore ake angangoita gumi nemashanu paAimia Inc.
"Karl ane nhoroondo inoshamisa yekufambisa kukura kwakasiyana-siyana kwezvirongwa zvekuvimbika uye kuunza mhedzisiro kuburikidza nehunyanzvi uye zano," akadaro Harry Taylor, WestJet Mutungamiriri wenguva pfupi uye CEO. “Tiri kutarisira kutambira Karl kuWestJet; ruzivo rwake ruchasimudzira chirongwa cheWestJet chekuvimbika kusvika pakakwirira. "
Iyo CLO ibasa richangogadzirwa rendege, rinoita basa rekukura WestJetChirongwa chekuvimbika, zvigadzirwa, masevhisi uye kudyidzana kuburikidza nehunyanzvi uye hutungamiriri.
“Sezvo WestJet Shanduko kubva pakudzoreredza kuenda pakuwedzera, yendege iri kuita mari yakakosha muchirongwa chayo chekuvimbika chakatobudirira, uye ndinofara kujoina timu panguva yakakosha zvakadaro, "akadaro Schuster. "Sezvo WestJet ichivaka kumashure yakasimba, kune nzira inoshamisa yekumhanya pamberi peWestJet Mibayiro uye tichave tichishanda kuunza vaenzi mamwe mabhenefiti neropafadzo kuburikidza nekusimudzira uye kuvimbika kwekuvimbika. Ndiri kufara kujoinha timu yeWestJet inoita zvekuvimbika pamwe chete na d'Arcy Monaghan, Mutevedzeri weMutungamiriri weWestJet, Zvirongwa zveKuvimbika uye ndinotarisira kushanda naye nechikwata kuti chirongwa chedu chisvike pakakwirira."
cannabis real estate zvikwereti anoti:
SeMutungamiriri uye Chief Executive Officer, anotarisira zano rendege, pamwe neMutevedzeri weMutungamiriri Mukuru uye Chief Marketing Officer. Yakanaka kwazvo Blog ndakanakidzwa nekuiverenga Ndokumbira Govera Rumwe Ruzivo rwakakodzera kuiverenga. Shanyira Mobile App Development Company.